के हो गोत्र व्यवस्था ? - बडिमालिका खबर
के हो गोत्र व्यवस्था ?
गोत्र व्यवस्था मान्छेहरु परिवारको संरचनामा आउनुभन्दा पहिलेदेखिको परम्परा हो भन्ने तर्क गर्छन् समाजशास्त्री लुईस मोर्गन । उनी पहिले गोत्र परम्परा आमाको आधारमा तय हुने गरेको बताउँछन् । पहिले बाबुको बारेमा यकिन नहुने बेलामा नै आमाको सन्तानको आधारमा गोत्र परम्परा चल्दै आएको थियो भन्ने उनको मान्यता छ । बिस्तारै पितृसत्ताको बोलवाला चलेर जातिप्रथाको सुरुवात भएपछि जातिप्रथा बाबुको आधारमा तय हुन थाल्यो । यसले गर्दा गोत्रपरम्परामा पनि परिवर्तन आएको लुईस बताउँछन् । फ्रेडरिक एन्गेल्सले भने मातृसत्ताको समयमा गोत्र परम्परा ऋषिको नामबाट नभई पशुपन्छीको नामबाट चलाउने गरिएको बताउँछन् ।